रामेछापमा भीरबाट बोलेरो जिप खस्दा,चालक सहित ३ जनाको मृ’त्यु
संखुवासभा ह’त्या प्रकरणमा आरोपी लोकबहादुरका भाइ पनि प’क्राउ,भेटियो यस्तो सामान
नेपाली सेनाकाे विभिन्न पदका लागि जागिर खुल्याे,यसरी िदन सकीन्छ दरखास्त
जानकी मन्दिरको दर्शन गरि आज भदौ ३१ को राशिफल हेर्नुस् ।तपाईंको आजको दिन कस्तो छ त ।
चर्चित हाँस्य सिरियल ‘सक्किगोनी’ अब जेपिटी क्रियशन अफिसियल बाट प्रशारण हुने
करिव ७५ हजारले १०/१० कित्ता पाउने ! तेह्रथुपम पावरको IPO बाँडफाँडको तयारी
शियरमा लगानी गरि कमाउनेहरुलाइ खुसिको खबर सबैलाई हात खाली नपार्ने १७.६४ करोडको आइ पि ओ आउदै।कति किता आबेदन दिने त?
मानुषी लघुवित्तकाे(आईपीओ)बाँडफाँडकाे मिति तोकियो,पाउनेकाे संख्या सार्वजनिक
आफ्नै श्रीमानले विदेशबाट श्रीमतीलाई गो’प्य अङग देखाउ भन्दै ध’म्की
२०७८ श्रावण १४, बिहीबार १३:२१
मोरङ जिल्ला मधुमल्ला निवासी एकजना महिला जसको नाम सपना श्रेष्ठ हो। उनी आफ्नै श्रीमान बिनोदराज सिवाबाट आफू यौ’न शो’षण प रे को भन्दै युवा मन नेपालका पत्रकार किशोर श्रेष्ठसँग आइन्। उनी भन्छिन्,श्रीमानले आफ्नो गो’प्य अङग देखाउन भन्दै विदेशबाट फोन गर्ने र नदेखाइदिँदा त’था’ना’म भन्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि फोन नगर्ने,ध’म्की दि ने गर्दै आइरहेका छन्।
उनको पहिलेको श्रीमती माइतमा बस्दै आइरहेकि रहेछिन्। उनले आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिग्रेपछि उनीसँग दोश्रो बिहे गरेका रहेछन्। अहिले उनकी पहिले कि श्रीमतीले पनि अर्कैसँग बिहे गरेकी छिन्।उनले आज भन्दा आठ बर्ष अगाडि करिब एक महिना जति बोलचाल भएपछि बिहे गरेकी थिइन्।
अहिले उनी आफू र छोरीको जिम्मा श्रीमानले लिनुपर्ने र आफू उसँग अलग्गै बस्न चाहेको र श्रीमानलाई बहुविवाहको मुद्धा चलाउन खोजिरहेकि छिन्। उता उनको श्रीमान भने अर्की श्रीमतीसँग अब मिलेर बस्नुपर्छ भन्दै फकाउँदै आइरहेका छन् तर उनी कुनै पनि हालतमा मिल्न चाहन्नन्।
श्रीमान भने ध’म्की’र्पूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै यदि केस लगाइस् भने म पैसा तिरेर निस्कन्छु भनेर पैसाको तु’जु’क देखाइरहेको पनि उनले बताएकी छिन्।भिडियो:-
टक नेपाल मिडिया नेटवर्क